मिनी-आलु tubers को उत्पादन को लागी प्रविधि को दक्षता बढ्दै - जर्नल "आलु प्रणाली"
मुख्य डाइजेस्ट विज्ञान प्रजनन र बीज उत्पादन
в फोकस मा, विशेषज्ञ सल्लाह, प्रजनन र बीज उत्पादन
Sergey Banadysev, कृषि विज्ञान को चिकित्सक, Doka Gene Technologies LLC
आलु मिनिट्यूबर (MK) बाँझो आलु बिरुवाको पहिलो ट्युबरस सन्तान हो। विकसित आलु उत्पादन भएका सबै देशहरूमा मिनी-ट्युबरहरू प्राप्त गर्नु आलुको बीउ योजनाको पहिलो वर्ष हो। आलुको मिनी-टुबरहरू संरक्षित जमिनमा मात्र हुर्काइन्छ, जसले भाइरल, फङ्गल र ब्याक्टेरियाजन्य रोगहरू भएका बिरुवाहरूमा पुन: संक्रमणको जोखिमलाई बहिष्कार गर्दछ (यदि बाँझो बिरुवाबाट ट्युबरहरू खुला जमिनमा हुर्काइन्छ भने, मिनी-ट्युबरहरू प्राप्त गर्दैनन्। परिणाम, तर पहिलो क्षेत्र पुस्ता)।
यो सामान्यतया स्वीकार गरिएको छ कि एक मिनी-कदको व्यास कम्तिमा 10 मिमी हुनुपर्छ, केहि कम एक माइक्रो-कद हो।
10 हजार टन कुलीन उत्पादनको लागि मिनी-ट्यूबरको आवश्यकता छ: OS र ES (मूल र एलिट बीउ उत्पादन) को पाँच-वर्ष योजनाको साथ - 50 हजार टुक्राहरू; OS र ES को चार-वर्ष योजना संग - 400 हजार टुक्रा; तीन वर्ष योजना संग -3मिलियन टुक्रा।
यस क्षेत्रमा रूसी संघको आफ्नै ठोस वैज्ञानिक र नवीन आधार छ। रूसी संघमा बढ्दो मिनी-ट्युबरहरूको लागि सबैभन्दा आधुनिक प्रविधिहरूको ठूलो मात्रामा परिचय सधैं विकसित आलु खेती गर्ने अन्य देशहरू भन्दा अगाडि गरिएको छ: त्यसैले सब्सट्रेट टेक्नोलोजी 40 वर्ष पहिले पेश गरिएको थियो, 15 बायोटेक्नोलोजिकल केन्द्रहरूले यसमा काम गरे; हाइड्रोपोनिक - 30 वर्ष पहिले, यो Doka - Gene Technologies, Meristematic Cultures द्वारा प्रयोग गरिन्छ; एरोपोनिक - 2000 को प्रारम्भमा कृषि जैव प्रविधिको अखिल-रूसी अनुसन्धान संस्थान (कृषि जैव प्रविधिको सबै-रूसी अनुसन्धान संस्थान) मा विकसित, 2010 देखि यो प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र द्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ र सक्रिय रूपमा विश्वभर फैलिएको छ। रूसी संघ मा, मिनी-कद बढ्दै गएको लागि औद्योगिक बिरुवाहरू उत्पादन गरिन्छ: आलुको रूख र मेरिस्टेम। उही समयमा, अधिकांश घरेलु बीउ-उत्पादन उद्यमहरूले अझै पनि सानो मात्रामा सानो-ट्युबर उत्पादन गर्छन्, अभिजात वर्ग प्राप्त गर्नको लागि पाँच वर्षको योजनाको आवश्यकताको सीमा भित्र। FAT-Agro कम्पनीले मात्र वार्षिक २० लाख युनिटभन्दा बढीको स्तरमा पुगेको छ, जुन तीन वर्षको योजनामा ​​जान पर्याप्त छ।
बीउ उत्पादन योजनालाई कम गर्न र उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न मिनी-कन्दको उत्पादनमा पूर्ण वृद्धि आलुको बीउ उत्पादनको विकास गर्ने रणनीतिक माध्यम हो। यस परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै, हालका वर्षहरूमा खेती प्रविधिहरू सुधार गर्न धेरै प्रयासहरू गरिएका छन्। आविष्कारहरूको मुख्य लक्ष्य भिट्रोमा र हरितगृहको प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा सकेसम्म धेरै सानो-ट्युबरहरू प्राप्त गर्नु हो। यसलाई प्राप्त गर्न, बाली उत्पादनका धेरै विधिहरू प्रयोग गरिन्छ, तर वैज्ञानिक अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा प्रस्तावित सबै समाधानहरूले औद्योगिक उत्पादनमा परिणाम दिँदैनन्।
कुशल उच्च-भोल्युम मिनिट्यूबर उत्पादनका धेरै पक्षहरू जान्ने तरिकाहरू छन्। मिनी-आलु tubers को रूसी उत्पादन सधैं सबैभन्दा कुशल र उन्नत वैज्ञानिक र प्राविधिक आधार मा गरिन्छ। र अब देशमा उपलब्ध र लागू प्रविधिहरू छन् जुन विश्व स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छन्।
मिनी-कदको योग्य उत्पादनको लागि प्राथमिक अवस्था हालको नियम र नियमहरूको अनुपालन हो। यस विषयमा रूसी संघको नियामक ढाँचा प्रकृतिमा सल्लाहकार छ, कृषि बालीहरूको प्रमाणीकरणमा हालको नियममा, उदाहरणका लागि, मिनी-आलुको कन्दको उत्पादन र प्रमाणीकरणको लागि नियमहरूको बारेमा कुनै शब्द छैन। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा ध्यान दिन जरुरी छ. विकसित आलुको बीउ उत्पादन भएका सबै देशहरूमा, संगठनका लागि अनिवार्य आवश्यकताहरू, उत्पादन गरिएका मिनी-टबरहरूको प्रविधि र गुणस्तर अपनाइएका छन्, आधिकारिक रूपमा स्वीकृत र कडाईका साथ पालना गरिएको छ।
राज्यले यस क्षेत्रमा आधिकारिक नियामक ढाँचा नबन्दासम्म यी आवश्यकताहरूलाई स्व-नियन्त्रणको लागि उद्यम मापदण्डको ढाँचामा, लघु-टुबरको उत्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने घरेलु उद्यमहरूले आधारको रूपमा लिनुपर्दछ। उदाहरण को लागी, रूसी संघ मा प्रजनन परिसर र प्रजनन ग्रीनहाउस NTP-APK 1.10.09.001-02 को प्राविधिक डिजाइन को लागी मापदण्डहरु छन्। यद्यपि, NTP का विकासकर्ताहरूले कागजातमा मिनी-कदहरू बढाउनका लागि बनाइएका संरचनाहरूको अनिवार्य विशेषताहरूको खण्ड समावेश गरेनन्। र त्यहाँ धेरै यस्ता सुविधाहरू छन्, उदाहरणका लागि: हरितगृहमा कपडा परिवर्तन गर्नको लागि ड्रेसिङ कोठाको साथ डबल ढोका हुनुपर्छ। हात धुने र कीटाणुरहित गर्नको लागि परिवर्तन गर्ने क्षेत्र फुट प्याड र डिटर्जेन्टले सुसज्जित हुनुपर्छ। प्रवेश द्वार र सबै भेन्टिलेसन खोल्दा एफिड प्रोटेक्शन मेस (जालको साइज अधिकतम ०.५ x ०.९ मिमी) ले ढाकिएको हुनुपर्छ। कोठाको तापक्रम र आर्द्रता (सिसाको घरको लागि लागू) को लागि राम्ररी नियन्त्रण हुनुपर्छ। जीवाणुरहित बिरुवाहरूको अनुकूलनको लागि माटो-रहित माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि माटो/माटोको मिश्रण प्रयोग गरिएको छ भने, माटोको रोगजनकहरूको अनुपस्थिति सुनिश्चित गर्न यसलाई उचित रूपमा उपचार/निर्जंतुकीकरण गर्नुपर्छ।
मिनिट्युबर बाली आधिकारिक रूपमा प्रमाणित माइक्रोप्लान्ट वा माइक्रोट्युबरहरू स्रोत सामग्रीको मेरिस्टेमेटिक टिस्युबाट एसेप्टिक वातावरणमा उब्जनीबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ, राम्रोसँग मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालामा आलुलाई संक्रमित गर्ने भाइरस, भाइरोइड र ब्याक्टेरियाको अनुपस्थितिको लागि परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ।
विधि, प्रक्रिया, मिनी-tubers को उत्पादन को सबै चरणहरु मा सामाग्री को गुणस्तर परीक्षण को आवृत्ति कडाईका साथ विनियमित छन्।
आलु माइक्रोप्रोपेगेशन प्रोटोकलको अनुकूलनमा धेरै व्यावहारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सञ्चित गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अनुसन्धानले पौष्टिक तत्वहरूको एकाग्रता र अनुपातमा परिवर्तनको आधारमा बिरुवाको वृद्धि र विकासमा सुधार गर्ने प्रशस्त अवसरहरू देखाउँछ। यो स्थापित गरिएको छ कि आलु meristems को संस्कृति मा वृद्धि नियामक को उपयोग आवश्यक छैन, तर केहि पदार्थ को थप, कम सांद्रता मा पनि, बढ्छ र सामग्री को उत्पादन को गति। विभिन्न प्रकाश स्रोतहरू, प्रकाश मोडहरू र कोठाको भेन्टिलेसन प्रयोग गरेर माइक्रोप्रोपगेट गरिएको आलु बिरुवाहरूको इन्क्युबेशन अवस्थाहरूलाई अनुकूलन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एलईडी लैंपको आगमनको साथ, तिनीहरूको क्षमताहरू सक्रिय रूपमा आलु माइक्रोप्रोपेगेशनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न थाले। रातो र टाढा रातो बत्ती स्पेक्ट्रम वृद्धि विशेषताहरु; यद्यपि, रातो + नीलो + टाढा रातो/सेतो प्रकाशको संयोजनले ट्युबर गठन र प्राथमिक मेटाबोलाइटहरूको संचयमा राम्रो प्रभाव पार्छ।
बढ्दो मिनी-ट्यूबरका लागि प्रविधिहरू दुई मुख्य समूहहरूमा विभाजित छन्: सब्सट्रेट (ठूलो विविधता) र गैर-सब्सट्रेट (पानी संस्कृति र एरोपोनिक्स)। मिनी-ट्यूबरको उत्पादनको लागि मुख्य प्रविधिहरू: प्राकृतिक सब्सट्रेटहरूमा (भोल्युमको 80%), हाइड्रोपोनिक र एरोपोनिक। माइक्रोट्युबरहरू प्राप्त गर्नु पनि MC को विषयसँग सम्बन्धित छ र स्रोत सामग्रीको ठूलो प्रजननको लागि बढ्दो रूपमा प्रयोग गरिन्छ। माइक्रोट्युबर र मिनिट्यूबरहरू बीचको भिन्नता माध्यमको मोडमा हुन्छ (माइक्रोट्युबरहरू भिट्रो अवस्थाहरूमा मात्र बाँझमा हुर्किन्छन् र मिनीट्यूबरहरू सुरक्षित एक्स-भिट्रो अवस्थाहरूमा मात्र हुर्किन्छन्) र ट्युबर साइजमा हुन्छ। धेरै अवस्थामा व्यावहारिक प्रयोगहरूमा प्राप्त नतिजा र निष्कर्षहरू इन भिट्रो संस्कृतिमा ट्युबराइजेसन उत्तेजित गर्ने सम्भावनाहरूको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक पोष्टुलेटहरूसँग मेल खाँदैन। यो दुवै आहारमा लागू हुन्छ, वृद्धि नियामकहरूको प्रयोग, साथै बढ्दो अवस्था र तनाव कारकहरूको प्रयोग। यदि माइक्रोट्युबरको उत्पादनको लागि प्राविधिक नियमहरूमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीले प्रायजसो अवस्थामा, सामान्य परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ - प्रति बोट 200-400 मिलीग्राम तौलको एक माइक्रोट्युबरको बारेमा वा थोरै भन्दा बढी, त्यसपछि विशिष्ट सम्बन्धमा प्रविधिको व्यावसायिक समायोजन। उत्पादन अवस्थाले कहिलेकाहीँ प्रक्रियाको दक्षता बढाउँछ। रूसी संघमा, मानक परीक्षण ट्यूबमा एउटा बिरुवाबाट ०.५ ग्राम भन्दा बढी तौलका कम्तीमा तीनवटा माइक्रोट्युबर उत्पादन गर्ने तरिका यस क्षेत्रमा छ।
माइक्रोट्युबरहरूको वर्षभरि खेती र तिनीहरूको गुणस्तर सुधारको लागि, विश्वमा विभिन्न डिजाइनका बायोरिएक्टरहरू व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिन्छ। यी अर्ध-स्वचालित प्रणालीहरूले तपाईंलाई गहन म्यानुअल प्रशोधन कम गर्न र त्यसैले उत्पादकता बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन अनुमति दिन्छ। बायोरिएक्टरहरूमा प्राप्त माइक्रोट्युबरहरू धेरै ठूलो द्रव्यमान र ठूलो व्यास हुन्छन्। यस क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि जापानी वैज्ञानिक र डिजाइनरहरूको विकास हो।
प्लाष्टिक कल्चर झोला प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा माइक्रोट्युबर उत्पादन प्रणालीले विभिन्न प्रकारका आधारमा प्रति झोला १०० देखि ३०० माइक्रोट्युबरहरू सफलतापूर्वक उत्पादन गर्छ। सुक्रोज, नाइट्रोजनको कम सामग्रीको सर्तमा पोषक तत्वहरूको एकाग्रता परिवर्तन गर्दै, मध्यममा पोटासियम फास्फेटको स्तर बढाएर माइक्रोट्यूबरहरूको कुल संख्या र औसत वजन बढाउन सम्भव बनायो। जापानी प्रविधिले 100 मिटर खेती कोठामा प्रति वर्ष 300 माइक्रोट्युबर (तीन फसल-चक्रमा) उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।2. र यस प्रविधिद्वारा प्राप्त 80% माइक्रोट्युबरहरूको द्रव्यमान 1 ग्राम भन्दा बढी हुन्छ, अर्थात्। सिधै खेतमा रोप्नको लागि उपयुक्त।
संसारभरि, प्राकृतिक सब्सट्रेटहरूमा मिनी-ट्युबरको उत्पादन प्रचलित छ। यो प्रविधि, राम्रोसँग स्थापित भए पनि, अझै पनि उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिन्छ। जीनोटाइप, इन भिट्रो खेतीको अवधि र अवस्था, बिरुवाको आकार, पोषक तत्वहरूको जोखिम र वृद्धि नियामकहरूले मिनीट्यूबरको उत्पादनलाई स्पष्ट रूपमा असर गर्छ। रोप्ने क्रममा बिरुवाको उमेर र पूर्व-उपचार, अवस्था र कडा हुने अवधि, रोप्ने र बढ्नको मौसम, माटोको वातावरणको संरचना, रोप्ने विधि, बिरुवाको स्थानको घनत्व, मलको मात्रा र प्रकाशले पनि असर गर्छ। मिनी-कद उत्पादनको तीव्रता।
धेरै प्राकृतिक पदार्थ र सामग्रीहरू मिनी-आलुको ट्युबरहरू बढ्नको लागि माध्यमको रूपमा उपयुक्त छन्। ग्रीनहाउस सब्सट्रेटहरूको मुख्य घटक परम्परागत रूपमा पीट हो। वैकल्पिक सामग्रीहरू - जस्तै पर्लाइट, भर्मिक्युलाइट र वर्मीकम्पोस्ट - पनि उनीहरूको स्वीकार्य वातन र पानी होल्ड गर्ने क्षमताको कारणले हालै लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।
प्रायजसो अवस्थामा, जब सब्सट्रेट संस्कृतिमा मिनी-कन्द बढ्दै जान्छ, यो म्याक्रो- र माइक्रोफर्टिलाइजरहरू लागू गर्न आवश्यक छ। विशेषज्ञहरु माझ, आवधिक पानी को उपयोग गरी र पोषक तत्वहरु संग बाँझो सब्सट्रेट उर्वर प्रयोग गर्ने प्रविधि हाइड्रोपोनिक्स भनिन्छ। मिनी-आलुको ट्युबरहरू बढाउन हाइड्रोपोनिक प्रविधिहरूमा निष्क्रिय सब्सट्रेटहरू (बालुवा, रूखको बोक्रा, नरिवल, इत्यादि) र शुद्ध पानी संस्कृति (पातलो पोषक तत्व) प्रयोग गरी प्रजातिहरू छन्।
ट्युबराइजेशन नियन्त्रण गर्ने सम्भाव्यताको सम्बन्धमा आलु पोषणको सिद्धान्तका सबै प्रावधानहरू हाइड्रोपोनिक खेतीमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, तर प्रत्येक विविधता र विभिन्न चरणहरूमा पोषक तत्वहरूको एकाग्रता र अनुपातमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको आवश्यकताको बुझाइ छ। वनस्पतिको वृद्धि, ट्युबराइजेशनको प्रारम्भ र बिरुवाको ट्युबरको वृद्धि। अधिकांश प्रकाशनहरूमा पोषक तत्व समाधान रचनाहरू दिइन्छ। एकै समयमा, एक बिरुवा र एक एकाइ क्षेत्रबाट प्राप्त tubers संख्या धेरै पटक फरक छ। जहाँसम्म ट्युबरको संख्या आमूल रूपमा बढाउनको लागि पोषक समाधानमा लक्षित समायोजनहरू (र यो हाइड्रोपोनिक्सको ठीक फाइदा हो) त्यहाँ धेरै कम खुला जानकारी छ। हालैका वर्षहरूमा, विगतका वर्षहरूका प्रसिद्ध रचनाहरूको सन्दर्भमा नभई मौलिक सामग्रीसहित केही प्रकाशनहरू मात्र प्रकाशित भएका छन्।
सबैभन्दा आधुनिक - एरोपोनिक - बढ्दो मिनी-कदको लागि प्रविधिमा धेरै आधारभूत सुविधाहरू छन्। आज सम्म, यसको कार्यान्वयनका सबै क्रमिक चरणहरू काम भइसकेका छन्, तर अन्वेषणात्मक अनुसन्धान जारी छ। एरोपोनिक्स टेक्नोलोजी जानकारीको विशेष मूल्य यो हो कि यसले आज विश्वभरको मिनीट्यूबर विकासको दिशा देखाउँदछ। यी विकासहरू लागू हुन्छन् वा बढ्दो मिनी-ट्यूबरहरूको लागि अन्य प्रविधिहरूमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ।
विशेष अवस्थाहरूको लागि मिनी-कदको उत्पादनको लागि प्रविधिको छनोट उत्पादन सूचकहरूको विश्लेषण, जोखिमको स्तर, श्रम स्रोतहरूको आवश्यकता, लगानी लागत, लागत र नाफाको तुलनामा आधारित हुनुपर्छ। प्रत्येक टेक्नोलोजीसँग धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दै उत्पादन क्षमतामा विकल्पहरू र महत्त्वपूर्ण उतार-चढ़ावहरू छन्। सबै प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन् र एक बाँझ संस्कृति वा माइक्रोट्यूबरबाट प्रारम्भिक बिरुवा सामग्रीमा आधारित हुन्छन्। यो चरण लगभग सार्वभौमिक छ, यो मानक मान्न सकिन्छ। बढ्दो मिनी-tubers को धेरै प्रविधि मा, तपाईं चर को एक ठूलो संख्या बाट छनोट गर्नुपर्छ।
धेरै जसो ठूला बीउ कम्पनीहरूले हाल पिटको व्यापक प्रयोगको साथ प्राकृतिक अर्गानो-मिनरल सब्सट्रेटहरूमा गिलास वा फिल्म माटोको हरितगृहहरूमा मिनी-ट्यूबरहरू उब्जाउँछन्। यो प्रविधिको सबैभन्दा कम लागत एउटा मिनी-टबर छ। एक नियमको रूपमा, एक बाली प्रति वर्ष बढ्छ। युरोपमा एउटा बिरुवाबाट ४-५ वटा कन्द पाउनु सामान्य मानिन्छ। माइक्रोफर्टिलाइजरहरूको विभेदित प्रयोग, जैविक रूपमा सक्रिय पदार्थहरू, PPP ले गुणन कारकलाई 4-5 सम्म बढाउन अनुमति दिन्छ।
बायोरिएक्टरको पक्षमा तर्कहरू बाँझोपन हुन्, प्रति इकाई क्षेत्रफलमा माइक्रो-ट्युबरको अधिकतम उत्पादन। बायोरिएक्टरका बेफाइदाहरू ठूलो संख्यामा बिरुवाको आवश्यकता, सानो आकारको ट्युबर, पकाउने समस्या र खेतमा यान्त्रिक रोपण हो।
हाइड्रोपोनिक्सका फाइदाहरू उत्पादनशीलता हुन्, ट्युबराइजेशन उत्तेजित गर्ने वास्तविक सम्भावना, औद्योगिक उपकरणहरू; विपक्ष - जरा प्रणालीको खराब विकास, पोषक तत्वको समाधानको माध्यमबाट संक्रमण फैलिने जोखिम, श्रमिकता। एरोपोनिक्सलाई जरा प्रणालीको लागि धेरै ठाउँ र पूर्ण छाया चाहिन्छ, राम्रो विकास र हावा आपूर्तिको कारण, हाइड्रोपोनिक्सको तुलनामा धेरै ट्युबरहरू गठन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, एरोपोनिक टेक्नोलोजी सबैभन्दा बढी माग छ, बिजुली आपूर्ति आधा घण्टा भन्दा बढी अवरुद्ध हुनु हुँदैन।
यो संक्षिप्त समीक्षाले देखाउँछ कि ठूलो संख्यामा मिनी-कन्द प्रयोग गरी कुलीन आलु उत्पादनको लागि तीन-वर्षीय योजनाको विकास पहिले नै वास्तविकता हो। मात्रामा बृद्धि र उत्पादनको तीव्रता न्यूनतम संख्यामा प्रारम्भिक बिरुवाहरूको साथमा प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा अधिकतम संख्यामा मिनी-ट्युबरहरू प्राप्त गरेर प्राप्त गरिन्छ। ढाकिएको माटो र स्रोत सामग्री महँगो छ, त्यसैले एउटा बिरुवाबाट 2-3 वटा मात्र ट्युबरहरू प्राप्त गर्नु एक अप्रत्याशित विकल्प हो, यद्यपि संसारमा मिनी-ट्यूबरहरूको मुख्य मात्रा अझै पनि यस तरिकाले उत्पादन गरिन्छ। सब्सट्रेट टेक्नोलोजीको साथ, उत्पादनको वास्तविक स्तर निम्न प्यारामिटरहरू अनुसार अनुमान गरिएको छ: सामान्य - 100 टुक्रा / मीटर2, राम्रो - 200 टुक्रा / मिटर2; उच्च - 300 टुक्रा / मीटर2 बढ्दो मौसमको लागि। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलोजीमा 500 मिनि-ट्युबर, एरोपोनिक - 1000 मिनि-ट्युबर प्रति वर्गमिटर उत्पादन गर्ने क्षमता छ। बढ्दो मौसमको लागि स्थापना क्षेत्रको m। सन्दर्भको लागि: २०२१ मा सब्सट्रेट टेक्नोलोजीको लागि खेती सुविधाहरूको लागत 2021 हजार रूबल थियो। प्रति वर्ग मीटर, हाइड्रोपोनिकको लागि - 50 हजार रूबल, एरोपोनिकको लागि - 100 हजार रूबल।
घरभित्रै सानो-ट्युबर हुर्काउने मुख्य समस्या सघन ट्युबर गठनको साथ सक्रिय वनस्पति विकासको संयोजन हासिल गर्नु हो। माइक्रोक्लाइमेट (तापमान, आर्द्रता, फोटोपीरियड) लाई अनुकूलन गरेर, खनिज पोषणलाई अनुकूलन गरेर ट्युबराइजेशनको तीव्रता बढाउन सम्भव छ; ट्युबराइजेशन उत्तेजकहरूको प्रयोग, वनस्पति वृद्धिमा प्रतिबन्ध। एकै समयमा, ठूला मात्रामा मिनी-ट्यूबरहरू प्राप्त गर्नु एक जटिल संगठनात्मक र प्राविधिक कार्य हो। मिनी-ट्युबरको गहन खेतीका सूक्ष्मताहरू 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि व्यावसायिक जानकारी भएको छ। सार्वजनिक डोमेनमा कुनै व्यावसायिक नियमहरू छैनन्, यो प्रत्येक व्यक्तिगत उद्यमको ज्ञान हो।
२०२२ को दोस्रो त्रैमासिकमा, यस विषयमा उपलब्ध वैज्ञानिक र व्यावसायिक जानकारी प्रस्तुत र विश्लेषण गर्दै, र मिनी-ट्युबर उत्पादनको तीव्रता बढाउन प्रभावकारी तरिकाहरूमा जोड दिँदै "मिनी आलु ट्युबर्स" पुस्तक प्रकाशित गरिनेछ। जानकारीको मात्रा 2022 पृष्ठहरू भन्दा बढी छ। पुस्तक सदस्यता द्वारा मात्र उपलब्ध हुनेछ। आवेदनहरू पठाउनुहोस्: s.banadysev@dokagene.ru
टैग: "डोका - जेनेटिक टेक्नोलोजी"आलु को मिनी-tubers को उत्पादन
यस वसन्तमा, क्रास्नोयार्स्क क्षेत्रको दर्जनौं हेक्टेयर खेत जग्गा पहिलो पटक नयाँ घरेलु प्रजातिहरूको आलुले ओगटेको छ - बिक्रीको लागि डिजाइन गरिएको मापनमा ...
रूसबाट आलुको बीउ आर्मेनियामा परीक्षण भइरहेको छ
रसियाबाट आयात गरिएको आलुको बीउ फिल्ड डे २०२२ प्रदर्शनीमा ग्युमरीको प्रजनन केन्द्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो, स्पुतनिक आर्मेनिया रिपोर्ट।
खेरसन क्षेत्रबाट कृषि उत्पादनहरू रूसमा आउन थाले: काकडी, जवान आलु, टमाटर, स्ट्रबेरी, चेरीहरू यस क्षेत्रमा उब्जनी, उल्लेखनीय ...
घरेलु छनोटलाई समर्थन गर्नुपर्छ
रूसी बीउ बजारमा आयात प्रतिस्थापनको समस्या, घरेलु प्रजनन र बीउ उत्पादनको विकासको बारेमा फेडरेशन काउन्सिल समिति अन्तर्गत विशेषज्ञ परिषद्का सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए।
धेरै वर्षको छनोट कार्य पछि, जुन जामार्टे आलु फार्ममा गरिएको थियो, बैजनी रंगको आलुको विविधता - प्रोविटा प्राप्त भयो, पोर्टल रिपोर्ट गर्दछ ...
सरकारले कृषि complex औद्योगिक परिसरमा अनुदान सहयोग विस्तार गर्नेछ